Uyifumana njani kwakhona ifayile yeLizwi ecinyiweyo | Iindaba zeGajethi
Okwangoku, abo bangenzi nkxaso-mali kungenxa yokuba abafuni, kuba sinenani elikhulu lokukhetha ngelo xesha soloko unolwazi olubaluleke kakhulu kwindawo ekhuselekileyo, nokuba kungokusebenza kwenkqubo ngokwayo okanye ngeenkonzo ezahlukeneyo zokugcina ilifu.
Ukuba ufikelele kweli nqaku, mhlawumbi ujonge indlela yokufumana kwakhona ifayile yeLizwi engasekho phantsi kolawulo lwethu nangasiphi na isizathu (kwaye zininzi). Ukuba le yimeko yakho, nanga amanyathelo ekufuneka uwalandele ukuze Buyisa iifayile zeLizwi ezisusiweyo.
Ukusuka kwiliGajethi yeActualidad sihlala sicebisa yenza ikopi rhoqo kuyo yonke idatha yakho ukwenzela ukuba kwimeko apho izixhobo ziyeke ukusebenza, sinokufumana kwakhona ezona fayile zibalulekileyo. Nangona kunjalo, ngelishwa sinokufumana ingxaki ebesingenayo: ukuba ifayile iyacinywa, inyamalale kwimbono yethu okanye asiyigcini.
1 Phinda ufumane ifayile yeLizwi esingayigcinanga
1.1 Sebenzisa i-AutoRecover kwiLizwi
2 Buyisa ifayile ye-Excel esiyicimileyo
2.1 Phinda usebenzise ibhendi
2.2 Fumana kwakhona iinguqulelo zangaphambili zefayile
2.3 Buyisela ugcino lweWindows
3 Ukufumana kwakhona ifayile yeLizwi esingayifumaniyo
4 Kwaye ukuba konke okunye kusilele ...
Phinda ufumane ifayile yeLizwi esingayigcinanga
Ukuba sisivalile isicelo kwaye asikhange sithathe manyathelo okugcina ikopi, konke akulahlekanga, kuba iOfisi iyalwazi olu hlobo lweengxaki kwaye isinika, ngokuzikhethela okuzenzekelayo, ukubanakho buyisa loo msebenzi siwugcinileyo nangasiphi na isizathu, kubandakanya ukuba umbane uphumile, okanye siphelelwe yibhetri kwiLaptop.
Ukuze sikwazi ukufikelela kwiikopi ezizenzekelayo ezenziwa liLizwi, kufuneka singene kwiFayile> uLwazi> Lawula amaxwebhu> Buyisa amaxwebhu angagcinwanga. Okulandelayo, umxholo kwifolda uza kuboniswa apho kugcinwa khona iikopi ezahlukeneyo zokwenza izinto ngokuzenzekelayo.
Sebenzisa i-AutoRecover kwiLizwi
Iinguqulelo zamva nje zeOfisi kaMicrosoft zibandakanya indawo yokufumana ngokuzenzekelayo, nangona eli nqaku lingenakwenziwa. Ukuthintela iingxaki ezinokubakho, eyona nto sinokuyenza kuyo qinisekisa ukuba iyasebenza kunye nokunciphisa ixesha lokugcina ngokuzenzekelayo. Ukujonga ukuba umsebenzi wokubuyisela ngokuzenzekelayo usebenza kwiLizwi, kufuneka senze amanyathelo alandelayo:
Cofa apha Oovimba kwaye emva koko ukhethe.
Emva koko, siya ku Gcina, ukhetho olufunyenwe kwikholamu ngasekhohlo kunye nenxalenye esekunene, sijonga indlela ibhokisi Gcina ulwazi oluzenzekelayo iphawulwe.
Enye yeebhokisi, ekufuneka itshekishwe nayo Gcina ingxelo yakutshanje ifunyenwe ngokuzenzekelayo xa ndivala ngaphandle kokugcina.
Okokugqibela, kufuneka zimisele ngalo lonke ixesha sifuna ukhuphelo lwenziwe. Ngokuzenzekelayo, ixesha elimiselweyo yimizuzu eli-10, kodwa ukuba sifuna ukuziphilisa empilweni, kufuneka siyinciphise ibe yimizuzu eli-1.
Buyisa ifayile ye-Excel esiyicimileyo
Phinda usebenzise ibhendi
Ngaphandle kwento yokuba abasebenzisi abaninzi bengathandi ukubona indlela umgqomo wokuphinda usetyenziswe uhlala ugcwele kwaye zihlala zibonwa ibophelelwe ukuyikhupha, okanye ucime ngokuthe ngqo iifayile ngaphandle kokudlula kuyo, le nkonzo (kuba ayisosicelo sokwenyani) yenye yazo ezona zixhobo zibalaseleyo kwihlabathi lekhompyuter, kwaye ikwafumaneka kokubini kwi-macOS nakusasazo olwahlukileyo lweLinux.
Umgqomo wokuphinda usebenzise kwakhona uzikhuphela ngokuzenzekelayo rhoqo kwiintsuku ezingama-30, ukuba asiyenzi ngaphambili. Le yindawo yokuqala apho kufuneka sijonge khona ukuba siyicime ngempazamo ifayile okanye asinakuyifumana kwi-hard drive yethu, okoko nje singayikhuphi, kuba kungenjalo, kuya kufuneka sisebenzise ezinye iindlela sikubonisa kweli nqaku.
Fumana kwakhona iinguqulelo zangaphambili zefayile
Ukuba asilufumani uguqulelo lwefayile esisebenze kuyo okokugqibela, Windows 10 usinika ifayile ye- Inkqubo yokubuyisela evumela ukuba sifikelele kwiinguqulelo zangaphambili zefayile efanayo, Umsebenzi olungileyo ukuba sifuna ukubuyisa inxenye yolwazi ebesikade silucima ngaphambili kodwa ngoku siyaludinga.
Eli nqaku alifumaneki ngokuthe ngqo kwiOfisi, endaweni yoko yinxalenye yenkqubo yokusebenza yeWindows. Ukuze sikwazi ukufikelela kwiinguqulelo zangaphambili zefayile enikiweyo, kufuneka sifikelele kwindlela yefayile. Emva koko, sibeka imouse kwifayile kwaye ucinezele iqhosha lasekunene ukufikelela kwimenyu yokuma kwayo.
Inyathelo elilandelayo kukucofa ekubuyiseleni iinguqulelo zangaphambili. Ngelo xesha, ibhokisi yencoko yababini ene Zonke iinguqulelo esizenzileyo kuxwebhu olunye. Ukufumana kwakhona uhlobo lwefayile ekuthethwa ngayo, kufuneka siyikhethe kwaye ucofe kwindawo evulekileyo. Zonke iinguqulelo ezikhoyo ziyalelwa ngokomhla, ke ukuba siyawazi umhla, iya kuba ngumcimbi wemizuzwana ukufumana idatha.
Buyisela ugcino lweWindows
Ukuba sifikelele kweli nqanaba ngenjongo yokubuyisela ifayile, kuya kufuneka sikhumbule ukuba Eli isenokuba lithuba lethu lokugqibela lokuyenza Logama nje sithathe isilumkiso sokwenza ikopi ngamaxesha athile, kuba kungenjalo akunakwenzeka ukuzama ukubuyisela ikopi yefayile apho ingekhoyo.
IMicrosoft kwiWindows 10 isinika inkqubo epheleleyo yoku yenza i-backups ekhulayo Kuzo zonke iifayile esizilungisileyo ngaxa lithile, ngeefayile ndithetha amaxwebhu, hayi iifayile eziyinxalenye yeenkqubo, kuba ikopi yogcino inokuhlala amashumi e-GB.
Ukuba le yimeko yethu, kufuneka singene kuphela kwimbali yeefayile zokugcina kwaye fumana indlela apho ifayile yayikhona okanye ifunyenwe. Ukuba emva kokucima ifayile, senze ugcino, ngelishwa sifumanisa ukuba akukho ndlela yokubuyisa ifayile.
Ukufumana kwakhona ifayile yeLizwi esingayifumaniyo
Ukukhawuleza ngumcebisi ombi kuyo yonke into. Ukuba senze uxwebhu kwaye sikhawulezile asikhumbuli ukuba sizigcine phi kwaye xa ukhangela ukuba akukho ndlela yakuyifumana, sinezisombululo ezibini kule ngxaki incinci. Into yokuqala ekufuneka yenziwe kukuvula iLizwi kwaye uye kuVula. Kweli candelo, zonke iifayile esizilungisileyo okanye esizenzileyo mva ziya kuboniswa. Kufuneka nje ucofe uxwebhu ekubhekiswa kulo kwaye kunjalo.
Ukuba ayibonakali kolu luhlu, enye indlela kukusebenzisa Ibhokisi yokukhangela yeWindows, ebekwe ecaleni kweqhosha lokuqala. Ukufumana uxwebhu, kufuneka sibhale kuphela icandelo lesicatshulwa okanye amagama esaziyo ukuba angaphakathi koxwebhu, akufuneki ibe ligama lefayile.
Nje ukuba siyifumene le fayile inombuzo, kufuneka yigcine apho sisazi ukuba siyakuhlala sinayo ngaphandle kwentliziyo yethu ihlupheka kwakhona ngokungafumani fayile esiyifunayo.
Kwaye ukuba konke okunye kusilele ...
Ukuba khange sikwazi ukufumana ifayile okanye iifayile esizijongileyo, ekuphela kwendlela esele siyishiyile, kuhlala kukho ithuba lokugqibela, kukusebenzisa usetyenziso olwahlukileyo esinalo ukubuyisa iifayile ezicinyiweyo. Kuxhomekeka kwixesha elidlulileyo ukusukela ekunyamalaleni, kuya kuba lula ngakumbi okanye kancinci ukuzama ukuyifumana kwakhona.
Olu hlobo lwezicelo, ayisoloko isebenza, ngaphambi kokuchitha imali, kuya kufuneka uzame iinguqulelo zasimahla abasinika zona, iinguqu ezikuvumela ukuba uskene i-hard drive yakho ukuze ususe iifayile. Ukuba isenokhetho lokufumana kwakhona, kuba ayonakaliswanga, lixesha lokuba uqwalasele ukuba kufanelekile na ukuhlawulela isicelo esipheleleyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » software » Uyifumana njani kwakhona ifayile yeLizwi ecinyiweyo
I-Tone Ultra kunye neTone esebenzayo +, nolu luhlu lwee-headphone ezinokuphinda zisongelwe